जनकपुरका डन ‘टक्ला’ भारतमा पक्राउ,नेपालमा सार्वजनिक
Posted by abc staff.4years,5months ago
धनुषा । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जनकपुर बमकाण्डका मुख्य योजनाकार सभासद् सञ्जयकुमार साह ‘टक्ला’लाई पक्राउपछि सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार पक्राउ परेका साहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीका अनुसार साहलाई ब्यूरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको विशेष टोलीले पर्साको बीरगञ्ज नजिकै छपकैयाबाट गएराति पक्राउ गरेको हो । भारत र नेपालको सिमानामा लुकेर बस्दै आएका साहलाई विशेष सुराकीको आधारमा पक्राउ गरिएको सीआईबीका कायम मुकायम प्रमुख एसएसपी उत्तमबाबु कार्कीले बताएका छन् ।
मोजामा लुकाई छिपाई सुन तस्करी
काठमाडौ । मोजामा लुकाई छिपाई सुनको तस्करी गर्ने दुई भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ । मलेसियन एयरको एमएस २१४ उडानबाट काठमाडौा आएका भारतीय नागरिक बाहक सन्दुराम मालिक र अजाद सिंहलाई मोजाभित्र लुकाईछिपाई ल्याएको ३ हजार ३ सय २ ग्राम सुनसहित प्रहरीले पक्राउ गरको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा आगमन भंसार चेकिङ पार गरिसकेका भारतीय नागरिकलाई प्रिपेड ट्याक्सी काउन्टरबाट अबैध सुनसहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गुप्तचरको प्रमुख फेर्न गुप्त दौड
काठमाडौ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङ आगामी १९ असारबाट अबकाश पाउने निश्चित भएपछि उक्त बिभागको प्रमुख बन्न नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ अधिकृतहरु गुप्त दौडमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा आईजीपी बन्ने दौडबाट असफल भएका डीआईजीद्धय राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाह उक्त गुप्त दौडमा लागेका हुन् । नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालकै हैसियतमा बस्न पाउने भएपछि डीआईजीद्धय भण्डारी र शाह यो दौडमा हिडेका हुन् । गुप्तचर विभागमा गुरुङपछि दोस्रो बरियतामा रहेका उपप्रमुख जीतबहादुर केसीको चयन प्राय निश्चित हुने भए पनि डीआईजीद्धयको यो प्रयासका कारण चुनौती थपिएको छ ।
लौनचौर प्रहरीमा डीएसपी शाहको तमाशा
काठमाडौं । प्रहरीको पहिलो दायित्व शान्ति सुरक्षा दिनु हो । दोस्रो सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु । तर, नेपालका प्रहरीहरुको त नियत नै खराब छ । किनकी जहाँ समस्या छ, त्यहाँ कसरी हुन्छ ब्यवसायी होस् वा ब्यक्तिलाई जालमा पारेर फाईदा कसरी कमाउने भन्नेतिर नै नेपाल प्रहरी उद्दत रहन्छ । अझ राज्यलाई कर तिरेर ब्यवसाय गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई त प्रहरीले विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने हो । दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन् । विदेशबाट स्वदेश फर्कने युवाबर्ग आजभोली रेष्टुरेन्ट, लाउन्च बारलगायतका ब्यवसायमा आकर्षित भएका छन् । नेपाल प्रहरीले ब्यवसायीलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा ग्राहकले झगडा गरे भने सञ्चालकलाई चाहिँ पक्राउ गरी थुन्न लैजान्छन् ।
मेडिकल माफियाबीच एक–अर्कालाई सिध्याउने षड्यन्त्र
रोशन पाण्डे / काठमाडौं । भविश्यमा डाक्टर, नर्स बन्ने चाहाना बोकेका विद्यार्थीका लागि मेडिकल ईन्ट्रान्स तयारी कक्षा गराउन खोलिएका च्याउ उम्रेसरी संस्थाहरुबीच नै अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । मेडिकल ईन्ट्रान्स तयारी कक्षा गराउन खोलिएका त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकले नै एकलौटी ब्यवसाय हत्याउन एकले अर्को संस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न थालेका हुन् । मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीलाई उनीहरुले आ–आफ्नो संस्थामा तान्न कसैलाई चिकित्सक अध्ययन गर्न फ्रि स्कलरसिपको लागि लगानी गरिरहेका छन् भने केही संस्थाले विज्ञापनमार्फत विभिन्न सेवा देखाएर विद्यार्थीलाई तान्ने होडबाजी चलेको छ ।
विश्वसम्पदा सूचीबाट नै हट्न सक्ने खतरामा बौद्धस्तुप
काठमाडौं । बौद्ध धर्मालम्बीहरुको पवित्रस्थल बौद्धस्तुप खतराको सुचीमा परिरहेका बेला विश्वसम्पदा सूचीबाट नै हट्न सक्ने खतरा बढेको छ । हाल बौद्धनाथ क्षेत्र विकाश समितिको अगुवाईमा बौद्ध स्तुपको बाहिरी भागमा मर्मतसम्भार कार्य भइरहेको छ । यो कार्य धार्मिक र सामाजिक हिसावले धेरै सह्रानिय छ । तर, हाल उक्त स्तुप मर्मत गर्दा बौद्धनाथ बिकाश समितिले ठूलो गल्ती गरेको एक पुरातत्वविदले बताएका छन् । स्तुप मर्मत गर्दा पुरातत्व बिभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनु पर्ने थियो । मर्मत सम्भार गर्दा सिमेन्ट र रङको सट्टा मासको पिठो, चाकु, गाँठेचुड, सुर्की र ईट्टा कुटेर बनाएको धुलो प्रयोग गर्नु पर्ने थियो ।
पूर्व मेयर स्थापित पनि कमाउनतिर लागेछन्
Posted by abc staff.4years,6months ago
काठमाडौं । दिपक मनाङगे वा गणेश लामाले कुनै ब्यक्ति वा सरकारको आम्दानी हुने ठाउं कब्जा गरी भाडा उठाए भने डनहरुले हप्ता असुली गरे भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्धा चलाउंथे । तर, यहां त काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापितले नै यस्तैगरी महिनावारी उठाउने गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । महानगरपालिकाका पूर्व मेयर स्थापितले सुन्धाराको छेउमा रहेका टहरा अर्थात सटरहरु कब्जा गरी मासिक लाखौं रुपैयां भाडा उठाउने गरेको रहस्य खुलेको हो । स्रोतका अनुसार स्थापित परिवारले सुन्धारास्थित रहेको काठमाडौं मलको बी ब्लकबाट बाहिर निस्कने बाटोमा बनेका २१ वटा सटरहरुबाट मासिक ९ लाख रुपैयां भन्दा बढी भाडा बुझ्ने गरेका छन् ।
गुप्तचर कुटिंदा गृहमन्त्रीलाई चिन्ता
काठमाडौं । गुप्तचरी गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा उठिरहेका बेला उक्त निकायप्रति गृहमन्त्री बामदेब गौतमलाई कति माया रहेछ भन्ने कुरा गत शुक्रबार एक कार्यक्रममा उनका आंखाबाट आंसु खसेपछि खुलेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित विभागको कार्यालयमा आयोजित निरीक्षण तथा स्वागत कार्यक्रममा गृहमन्त्री गौतमसहित गृहसचिव, गृहका उच्च अधिकारी र विभागका कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो । सो कार्यक्रममा विभागलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हतियारको तालिम दिने र विभागलाई स्रोत तथा साधनले सम्पन्न गराउनु पर्नेमा मन्त्री र सचिवले जोड दिएका थिए ।
यौनजन्य हिंसा पीडित बालबालिका तेक्वान्दो सिक्दैं
सञ्जय श्रेष्ठ । काठमाडौं । नेपालमा तेक्वान्दो खेलसंग आवद्ध खेलाडि लगभग एक लाख छन् । तेक्वान्दो खेल प्रशिक्षण गर्ने डोजाङ प्रशिक्षकको पनि कमी छैन् । कतिपय खेलाडिलाई त तेक्वान्दो किन र कसका लागि खेल्ने समेत पत्तो छैन् । सयौं डोजाङहरु औंलामा गन्न सकिने भने एक दर्जन जति मात्र छन् । तेक्वान्दो खेल खेलेर के गर्ने ? खेलाडि बनेर के गर्ने ? ब्यक्तिगत रुपमा फाइदा के हुन्छ ? राष्ट्रको लागि फाईदा के हुन्छ ? प्रशिक्षकले नेपाली तेक्वान्दो खेलाडिहरुलाई ज्ञान दिन सकिरहेको अवस्था छैन् । यस्तै भिड र अन्यौलमा एक बर्ष अगाडि रक्षा नेपाल नामक तेक्वान्दो डोजाङको स्थापना भयो ।
खरेलका घुमुवाको फाईल पल्टाउंदै अख्तियार
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यारत विवादास्पद प्रहरी निरीक्षक कुमुद ढुंगेलको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको फाईल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनःपल्टाएको छ । प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अख्तियारमा नियुक्ति हुनु अघि अर्थात गत २०६९ असोज ४ गते ढुंगेलले सेटिङ मिलाएर स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्तिको फाईल तामेलीमा खाख्न सफल भएका थिए । तामेलीमा राखेको फाईललाई ढुंगेलले भने सफाई पाएको दलिल पेश गर्दै तत्कालिन दरबारमार्ग प्रहरी प्रभाग हुंदै पुनः एसएसपी रमेश खरेललाई दबाब दिन लगाएर परिसरमा पुग्न सफल भएका छन् ।
काष्ठमण्डप बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको छानविन
काठमाडौं । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकमा हुने आर्थिक अनियमितता र धितो अधिकत मुल्याङकन गरी ऋण प्रवाह गरेको बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले छानविन थालेको छ । बैंकमा सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक निर्देशक बनेका चन्द्र खत्रीले नै मिटरब्याजमा रुपैया लगानी गर्ने गरेको तथा कमसल धितो खोज्दै बैंक नै धरापमा पार्ने गरी ऋण प्रवाह गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सञ्चालक खत्रीको समुहले विभिन्न सर्वसाधारण ब्यक्तिलाई मिटरब्याजमा रकम लगानी गर्ने तथा कानूनले बर्जित गरेको ब्याज असुल्ने क्रममा काष्ठमण्डप बैंकबाट ऋण प्रवाह गराई पुनः अवैध ब्याज असुल्न यस्तो कर्तुत गर्दै आएका थिए । खत्रीको समुहका बैंकका जीएम उमेश रेग्मी र खत्रीका ब्यवसायीक पार्टनर विकासबाबु बानिया रहेका छन् ।
अर्बपति ‘मिटरराजा’ आफैले खनेको खाल्डोमा
काठमाडौं । दुई सय सत्तरी प्रतिशतसम्मको बाध्यात्मक ब्याज लिने अर्बपति ‘मिटरराजा’ महेशबहादुर सिंह अन्ततः आफुले खनेको खाल्डोमा आफैं परेका छन् । सिंहले लामो समयदेखि लगानी गरेका ब्यक्तिहरुलाई पेस्तोल देखाउने, धम्क्याउने र रकम समयमा नदिए अपहरण गरी बन्धक बनाएर जर्वजस्ती कागज गराउने गरेका थिए । पीडित मध्येका ब्यापारीहरु क्रमशः प्रकाशचन्द्र बस्नेत, रईश थापा र राजाराम बानियांले अपहरण मुद्धा हालेपछि सिंहलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको थियो । राजधानीबाट प्रकाशित हुने जनप्रहार साप्ताहिकले प्रथम पटक सिंहले गरेका अवैध र गैरकानूनी कार्यको भण्डाफोर गरेपछि मिटरराजा सिंह ०७० सालभर पत्रपत्रिकामा समाचारको पात्र बनिरहे । अन्ततः काठमाडौं परिसरमा प्रमुख बनेर आएका एसएसपी रमेश खरेलले सिंहलाई पक्राउ गरेर पीडितलाई राहत दिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि पीडितलाई न्याए दियो ।